Furan = Kobaca | Martech Zone
Axad, Juun 24, 2005 Sabtida, Oktoobar 18, 2014 Douglas Karr
Horraantii sannadkan, waxaan la shaqeeyay Kooxda Qaranka ee NFL si aan u qiimeeyo keydkooda xogta iyo iimaylka aaladaha suuqgeynta Waxay ahayd qiimeyn dhammaystiran oo qalab badan oo ay haystaan. Meelaha aan diirada saaray waxay ahaayeen:
Awood u leh inuu dhexgalo xalka dibedda
Awood u siinta otomaatiga howlaha
Waxkaqabadka shirkadda iyada oo loo marayo maaraynta xisaabta iyo taageerada
Labadii ugu horreysay waxay ahaayeen faa'iidooyin mustaqbalka. Waxaan doonayay inaan hubiyo in ururku uu la shaqeynayay xalal isku dhafan isdhexgalka iyo otomatiga, in kasta oo astaamaha hada jira aysan aheyn ilaa tartanka. Waa dood adag in dadka la fahamsiiyo, laakiin shirkaduhu waxay leeyihiin karti asaasi ah. Markay bilaabaan inay ka shaqeeyaan wixii ka baxsan awoodahaas aasaasiga ah si ay u soo saaraan dakhli dheeri ah, waxay bilaabaan inay daciifiyaan wax soo saarkooda asaasiga ah waxayna u badan tahay inay yeelan doonaan xulasho badeecooyin leh hodan, laakiin ku liita naqshadeynta, taageerada, iyo hal-abuurnimada.
Muuqaalka tikniyoolajiyadda maanta waa is beddelayaa. Waxaan doorbidi lahaa shirkadaha inay furaan tikniyoolajiyado si otomaatig ah iskumar ahaanna isugu dhafan kara, marka loo eego alaabada hodanka ku ah muuqaalka.
Ugu dambeyntiina, shirkaddu waxay qaadatay taladayda. Halkii ay ka shaqeyn lahaayeen hal xal, waxay bilaabeen inay ka shaqeeyaan 3 xal oo kala duwan, iyo mid kale oo aan hadda la heli karin, ayaa ku wareegsan geeska. Tigidhkooda waxaa lagu sameeyaa nidaamka tigidhkooda, Maareynta Xiriirka Macaamiilkooda waxaa lagu sameeyaa nidaamkooda CRM (Iibka), iyo Xalkooda Suuqgeynta Emailka waxaa lagu sameeyaa Xallintooda Suuqgeynta Emailka (Exacttarget). Xalka 4aad waa xalka guryaha ee internetka, wax aanan arag ilaa taariikhda.
Toddobaad gudihiis markii ugu horreysay ee isdhexgalka, waxaan email ugu helnay albaabka si aan u hagaajino xiriirka ay la leeyihiin kuwa heysta Tigidhada Xilliga. Hadda waxaan ka shaqeyneynaa isku darka keydkooda tikidhada CRM… caqabadda jirta ayaa ah in nidaamka tikidhada uusan aheyn mid saaxiibtinimo. Taasi waa nasiib darro waxaana loo arkaa inay tahay xannibaad waddo u ah horumarka joogtada ah ee geeddi-socodka.
Shirkadda tigidhada iibisa ayaa laga yaabaa inay rabto inay dib uga fikirto istiraatiijiyadooda oo ay ku ekaato awooddooda asaasiga ah, haddii kale qof kale ayaa la imaan doona xal si fiican u ciyaara oo beddela.
Tags: APIbarnaamijka barnaamijyada barnaamijkakoritaankasoftware isku dhafandhexgalkabarnaamij furan